fMRI (၂၀၀၅) မှထုတ်ဖော်ပြထားသောအထီးလိင်မှုနှိုးဆွမှု၏လှုံ့ဆော်မှု - ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ - Your Brain On Porn
Neuroimage ။ 2005 Jul 15;26(4):1086-96.
Ferretti တစ်ဦးက, Caulo M က, del Gratta ကို C, di Matteo R ကို, Merla တစ်ဦးက, Montorsi က F, ပီဇာ V, Pompa P, Rigatti P ကို, Rossini pm တွင်, Salonia တစ်ဦးက, Tartaro တစ်ဦးက, Romani GL.
ခီတီ၊ အီတလီ၊ တီမိုနာ Avanzate Biomediche-Fondazione Università G. D'Annunzio၊ အီတလီ၊ Chieti တက္ကသိုလ်၊ Universita G. D'Annunzio Dipartmento di Scienze ClinicheeBioimmagini
အထီးလိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏အရံယန္တရားများကိုလူသိများသည်။ မကြာသေးမီကထိုကဲ့သို့သော PET သို့မဟုတ် fMRI ကဲ့သို့သော neuroimaging နည်းစနစ်များသည် subjacent cerebral ယန္တရားများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကျန်းမာသောဘာသာရပ် (၁၀) ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် fMRI ပုံရိပ်များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထူးခြားသောမြင်ကွင်းများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိသော ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်နှင့်စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ထားသော MRI နှင့်လိုက်ဖက်သည့်အဆုတ်ရောင် cuff အားဖြင့် penile tumescence ၏လမ်းကြောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်မှုနှိုးဆွခြင်းနှင့်လိင်တံထခြင်းသို့ ဦး တည်စေသောဗီဒီယိုကလစ်များမှထုတ်ယူထားသောအသက်တာကိုကြာရှည်သည့်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
ဤနှိုင်းယှဉ်ချက်နှင့်ဗီဒီယိုကလစ်များတွင် penile tumescence of course of use ကိုအချိန်ပြတ်ပြတ်သားသားဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ရန်နှင့် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအဆင့်များနှင့်ဆက်စပ်မှုပြုသည်။ activation မြေပုံများသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ရှုပ်ထွေးသောအာရုံကြောဆိုင်ရာ circuit ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
ဒီတိုက်နယ်၏, အနည်းငယ်သောareasရိယာများ (anterior cingulate, insula, amygdala, hypothalamus နှင့်အလယ်ပိုင်း somatosensory cortices) သည်အထူးသဖြင့် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤဒေသများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအချိန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပြောင်းလဲနေသောဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဒီကွဲပြားခြားနားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကဲဖြတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ to နှင့်ကိုက်ညီပေလိမ့်မည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရအထီးကျန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝြဖစ်စဉ်အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုထုံးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့အတွက်ရှုထောင့်သစ်များကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။